Fanaterana ny fotoana: In 9 herinandro
Supply fahafahana: 30 milentika isam-bolana
Izany no ampiasaina amin'ny rà-peo, hopitaly, toby valan'aretina ary ny sasany fikarohana Institiota. Mety manao ambany miasa faritra mafana ny 2-8 ℃ hitandrina ny ra fanodinana avy ny fitaoman 'avo hafanana ivelany, izay toerana azo antoka kokoa ny ra. Mety azo ampiasaina ho an'ny Low Temperature fandidiana faty Platform.
Ny mari-pana ao amin'ny faritra no miasa fanamiana ary tsy misy condensation.
Ny UV sterilizer manome antoka fa ny faritra miasa dia afaka amin'ny aretina.
Nozaraina Roa ny rafitra; Tsy misy tabataba.
Mora mifindra sy hamehezany.
Taratasy fanamarinana: ISO14001
Next: Fiomanana fitaovam-Cryoprecipitated Antithemophilic lafin-javatra
Medical Low Temperature Miasa Kabinetra